(Dhegayso) Dowladda Puntland oo ka digtay caafimaad darrada ka dhalan karta cunitaanka hilibka xoolaha abaaraysan. | puntlandi.com
(Dhegayso) Dowladda Puntland oo ka digtay caafimaad darrada ka dhalan karta cunitaanka hilibka xoolaha abaaraysan.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xaashi (Qoobdeero) ayaa si weyn uga digay halista caatimaad ee ka dhalan karta cunitaanka hilibka xoolaha caatada ah ee abaartu saameysay.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ayaa ugu baaqay wasaaradda caafimaadka iyo waaxyaha faya-dhowrka dowladdaha hoose ee Puntland inay suuqyada hilibka ka mamnuucaan in lagu gowraco xoolaha caatada ah ee takartu ka yaacday, kuwaas oo uu sheegay inay sababi karaan cuduro uu kamid yahay Daacuunka iyo kuwo kale oo kasii qatarsan.
Qoob-deero ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka xoolaha ka ganacsada inaysan bulshadooda ku haligin neef jiran oo abaaraysan hilibkiisa ama caanihiisa, maxaa yeelay wuxuu sheegay in lagu jiro waqti adag oo cudurkii Shuban biyoodku sii faafayo, iskuna badali kara Daacuun.
Halkaan ka dhageyso codka wasiirka oo ah wareysi uu siiyay Radio Sahan Garowe,